Neef-mareenka/Wadnaha Archives - Somali Kidshealth
Hargabka ama Dureyga waa cuddur faafa oo si baahsan la isagu gudbiyo. Wuxuu ku dhacaa qaybta sare ee habdhiska neefsashada ee kala ah sanka, cunaha,iyo gododka sanka. Hargabka waxaa keena ugu yaraan labo boqol oo nooc jeermiska Fayraska ah oo kala duwan. Nooca ugu balaaran ee keena hargabka waxaa la yiraahdaa Rhinoviruses. Carruurtu wax badan bay qaadaan hargabka laakiin isla markiiba isla noocii oo durey ah ayaa ku soo noqda. Waa maxay sababtu? Waxaan sheegnay in labo boqol oo nooc oo fayras ah oo kala duwan inay keenaan hargabka, markaas haddii hadda ilmaha hargab ku dhaco cunnugu wuxuu samaysataa difaac iyo tallaal uu uga hortago in mar kale isla fayraskii jirro ku keeno. Nasiibdarose, waxaa ilmihii haddana ku dhaca nooc kale oo Fayras ah. Hargabka waa cuddurka ugu badan ee ku dh...
Apr272013 by admin1 Comment
Waxaad maqashaa carruur banaanka ku ciyaaraysa galabkii mar cirku soo hooray. Waalidiintu way ku qayliyaan carruurtii, "carruureey soo gala gudaha yaan qaboow idin galine". Laakiin Qaboowgu ama nimooniyadu maxay tahay? Mise laga qaadaa hawada qaboow sida roobka da'aya oo kale. Soomaalidu cuddurkaan magacyo badan bay u taqaan. Waxaa ka mid ah magacyadaas Qaboow, oof-wareen, qaar-jeex iyo koolbo-aariyo. Waxaan doortay inaan u daayo magaciisa laatiinka ah ee Nimooniya. Nimooniya waa cuddur ku dhaca sanbabada oo ay keenaan jeermiyada kala ah Baakteeriya iyo Virus. Wuxuu cuddurku ku dhacaa dhamaan dadka ilaa carruur ilaa waayeel. Nimooniyada waxaa lagu qaadaa marka qofku neefsado hawo ay la socdaan jeermiyada ama baakteeriyada ama firaska, oo markaas gaara habdhisyada ama kiishahka alvio...
Apr232013 by adminNo Comments
Bronchiolitis waa caabuq ama infection ku dhaca tuubooyinka yar yar(Bronchioles) ee sanbabka ee hawadu marto. Inta badan caabuqaan waxaa keena jeermiga Viruska, wuxuuna haleelaa carruurta ka yar labo sanno. Sidoo kale, inta badan wuxuu ku dhacaa carruurta aan naaska la nuujin ama ku nool meelaha isku-raranta ah. Caadiyan hawadu waxay jirka ka soo gashaa sanka, dabadeedna waxay sii martaa hunguriga cad ilaa ay u gudubto dhuumaha Bronches. Dhuumaha bronches waxaa ka sii farcama tuubooyinka bronchioles, aakhirka waxay hawadu tagtaa kiishashka yar yar ee malaayiinta ah ee la yiraahdo Alvioli. Marka caabuqu yimaado ayaa tuubooyinkaas waxaa buuxiya xab iyo barar, taasoo ku keenta in ogsijiintu u gudbi waydo kiishahshka alvioli, waxaana ilmuhu dareemaa neef-qabatin iyo neef-tuur. Cuddurkaa...